“द व्हाइट टाइगर” : फिल्म समीक्षा – Janapriyakhabar
यदाकदा सुनिन्छ,भारत एक प्रजातान्त्रिक देश हो र यहाँ सबैले अघि बढ्नको लागि अवसर पाउछन् । के साच्चै यो कुरा सत्य हो? त्यहाँ अझैसम्म पनि यति धेरै गरीबीहरू छन्, मानिसहरू बिहानबेलुकाको छाक टार्न त्यहाँ चौविसैं घण्टा काम गर्न र अरूको गुलामी बन्न समेत जनता सहजै राजी छन् । त्यहाँ गरीब तथा असहाय मानिसहरूलाई अघि बढ्न रोकिन्छ।
त्यहाँका मानिसहरू चन्दा लिएर नोकरी गरिरहेका छन् । त्यहाँका मानिसहरूको रगत यति चिसो छ, र काध यति धेरै झुकेको छ । उनीहरू मालिकको कुनै पनि कुरालाई यति ठुलो मान्छन् र उनीहरू मालिकको कुरामा कुनै विरोध गर्ने तागत नै राख्न सक्दैनन् । जातीयताले गढेको यो देशमा कोही माथि कोही तल परिरहन्छन् । कुनै पनि तल्लो जातको मानिस यहाँ अघि बढ्न चाहेमा उसलाई भ्रष्ट बनाएर गिराउने र उसलाई लुट्ने चलन रहेको छ । यी सबै कुराहरूको बेलिविस्तार फिल्म ‘द व्हाइट टाइगर’ को हो ।
यस फिल्मका लेखक “अरविंद अडिगा” को बूकर पुरस्कार विजेता पुस्तक ‘कर चुकी’किताबमा आधारित फिल्म हो । जहाँ जातिवाद तथा शोषणको नराम्रो रूप देखाइएको छ ।
कहानी बलराम हलवाई (आदर्श गौरव) नामक युवाको हो । जो बचपन देखि निकै होशियार रहन्छ र उसलाई एक पटक उसको शिक्षकले ‘व्हाइट टाइगर’ भनेर पनि भन्दछ । गरीबीको कारण उसले आफ्नो पढाइ पनि अधुरो छोडनु परेको हुन्छ । तर, ऊ आफ्नो अगाडि बढ्ने महत्वाकांक्षालाई कहिल्यै पनि पछाडि पर्न दिदैन ।
जमीन्दारको कान्छो छोरा अशोक (राजकुमार राव)ले जब बलरामलाई देख्छ तब,ऊ सोच्न थाल्छ कि बलरामको सहारामा म निकै अघि बढ्न सक्छु । र ऊ अशोक पछि बलरामको ड्राइभर बनेर दिल्ली आउँछ ।
बलरामलाई सम्झ्ना आउछ कि भारतमा समाजको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको धनि र गरिव बिचको भेदभाव तथा गरिवलाई धनिले गर्ने व्यवहारको यो दम्भ तोड्न उनी चहान्थे । यस्तो गर्न सकिन्छ या सकिदैन यसको लागि उनले फिल्म देखाउन उनले जरुरी ठाने ।
फिल्ममा विभिन्न भुमिकामा रहेका व्यक्तिहरूको सहारामा केही कुराहरू बताइएको छ । बलरामले केवल मालिकहरूलाई मात्र होइन, उसका परिवारहरूको पनि शोषण गर्दछ । बलरामको जाति कै एक महिला नेता बन्न चहान्थिन्‌ र ऊ पनि भ्रष्टाचार गर्दथिन्। बलरामलाई सम्झना आउँछ कि गरीबको दम्भ तोड्न ऊ कसरी सफल रह्यो कि उसलाई अपराध पनि गर्न पर्यो ।
भारतको ठुलो मान्छे आबादी आज ड्राइबर छन्, चपरासी जस्ता काम गरिरहेका छन् । जो जसलाई सानो सम्झिन्छन् र उनी उसलाई नै शोषण गर्न तम्सिन्छन् । उनलाई फेरि बलराम को कहानी आफ्नो जस्तै लाग्छ । करोडौ रूपयाँमा बनेको फ्लाटमा रहने वाला व्यक्ति आज ड्राइभर विल्डिङ सतह देखि अध्यारो सुनसान ठाउँमा रहेर आदेशको प्रतीक्षा के गरिरहेको छ ।
निर्देशक रामिन बहरानीले एउटा अनौठो अन्दाजमा यी कहानीहरूलाई मनोरञ्जन तरिकाबाट प्रस्तुत दिएका छन् ।आफ्नो मुख्य क्यारेक्टरको मनमा के कुरा चलिरहेको छ त्यो कुरालाई देखाउन फिल्म सफल रहेको छ । फिल्मले हालको अवस्थामा पुरा खुलेर राम्रोसँग प्रस्तुति दिएको छ तर, काहिँँ कतै केही समस्याहरू पनि आएका छन् । जब यी नै कुराहरू देखाउनु थियो भने वाइस ओभरको यति धेरैै जरुरी किन पर्यो?
रामिनको सारा कामहरू सिनेमाटोग्राफर पाओलो कारनेराले सहजै तरिकाबाट गरिदिएका छन् । फिल्ममा निकै कमालको सिन सुट गरिएको छ ।
फिल्ममा मुख्य भुमिका बलरामको रहेको छ । जसमा जुन तरिकाबाट आदर्श गौरवका कुराहरू प्रस्तुत गरिएको छ यो लज्जास्पद कुरा हो । बलरामलाई र आदर्शलाई अलगअलग गर्नु निकै मुस्किल काम हो । बलरामको मासूमियत, झटपटाहट, महत्वाकांक्षा र गुम्सिएको आदर्शलाई उनले आफ्नो अभिनय मार्फत प्रस्तुत गरेका छन् । उक्त फिल्ममा कुमार राव, प्रियंका चोपडा, महेश मांजरेकर, स्वरूप सम्पत सहित धेरै कलाकारहरूको शानदार अभिनय रहेको छ।
एउटा भारतमा दुईवटा देश बसेका छ , यो कुरालाई उजागर गर्न फिल्म सफल रहेको छ ।
निर्माता : मुकुल देओरा, रामिन बहरानी, प्रेम अक्काराजू, प्रियंका चोपडा
निर्देशक : रामिन बहरानी
कलाकार : आदर्श गौरव, प्रियंका चोपडा, राजकुमार राव, महेश मांजरेकर, स्वरूप सम्पत
फिल्म उपलब्ध :- सोह्र वर्ष देखि माथिका मानिसहरूको लागि
नायिका प्रियंका कार्की आजबाट ३४ औँ वर्षमा